10/07/2019 mayoo 0
အေးချမ်းခြင်း၏ လျို့ဝှက်ချက် ။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်း ဒီမိုက ရေစီ ဘိုးအေကြီး အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ လေးနှစ် သက်တမ်း ၂ ကြိမ် သမ္မတ တာဝန် ထမ်းဆောင် ပြီးရင် နောက်ထပ် ဆက်လက် အရွေးခံခွင့် မရှိတော့ဘူး။ Continuous reading
10/07/2019 lin htet 0
ဆီး ချို ကျ စေ မယ့် ဆီး ဖြူ သီး ဖျော် ရည် ပြု လုပ် နည်း
ဆီး ချို ကျ စေ မယ့် ဆီး ဖြူ သီး ဖျော် ရည် ပြု လုပ် နည်း ဆီး ချို ဖြစ် ပြီ ဆို ရင် ကု သ နိုင် တဲ့ ဆေး ခု Continuous reading
အေးစက်နေတဲ့ Relationship လေးတွေ ပြန်ပြီးနွေးထွေးလာစေဖို့နည်းလမ်း(၅)ခု
အေးစက်နေတဲ့ Relationship လေးတွေ ပြန်ပြီးနွေးထွေးလာစေဖို့နည်းလမ်း(၅)ခု ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ ဘယ်လောက်ပဲ ခိုင်မြဲတယ်လို့ ပြောပေမယ့် တစ်ခါ တစ်လေမှာတော့ ပြဿနာပေါင်းများစွာကြောင့် အေးစက် သွားတာမျိုး၊ မသိ ကျိုးကျွံပြုခံရတာမျိုးတွေကို လည်း ကြုံရတတ်တာပါ။ တချို့ဆိုရင် အရူးအမူးချစ်ခဲ့ကြတဲ့နှစ်တွေရဲ့နောက်မှာ ဘာကြောင့်မှန်းမသိပဲ ဆက်ဆံရေးတွေ အေးစက် သွားတာမျိုး ဖြစ်ကြပြန်ရော။ ဒီတော့ Continuous reading
မီးအိမ်ရှင်ဆရာဆု ရသွားသူ မသန်ပေမယ့်စွမ်းတဲ့ ဆရာမလေး
မီးအိမ်ရှင်ဆရာဆု ရသွားသူ မသန်ပေမယ့်စွမ်းတဲ့ ဆရာမလေး မူလတန်းပြရာထူးအတွက် လူတွေ့အစစ်အဆေးခံရန် အင်တာဗျူးခန်းထဲသို့ မအိအိညိမ်းဝင်လာခဲ့သည်။ရေနံဝနေသည့် ညောင်ဦးမြို့ ကျွန်းပျဉ်ထောင်ပျဉ်ကာ နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီး၏ အခန်းအတွင်း ရောက်သည်နှင့် ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်နေကြသော လူတွေ့စစ်မည့်အရာရှိသုံးဦးက သူ၏ညာဘက်ခြေထောက် ခြေဖျားထောက်သွားသည်ကို အထူးအဆန်းသဖွယ် အကဲခတ်နေကြသည်။ အခန်းအတွင်းရောက်သောအခါ သဘောကောင်းပုံရသော အသက် ၄၀ ခန့်အရွယ် အရာရှိတစ်ဦးက Continuous reading
မိုးရာသီမှာ Dating လုပ်လို့ကောင်းမယ့် အကြံဉာဏ်လေးတွေ
မိုးရာသီမှာ Dating လုပ်လို့ကောင်းမယ့် အကြံဉာဏ်လေးတွေ ချစ်သူ စုံတွဲ တွေအတွက်တော့ မိုးရာသီဆိုတာ ပျော်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ရာသီ တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ အပြင်သွားမယ်လို့ ချိန်းပြီးတော့မှ မိုးတွေ သည်းလာလို့ ချိန်းထားတာ ဖျက်လိုက် ရတာ၊ နှစ်ယောက်သား ပန်းခြံထဲမှာ ရှိနေတုန်း မိုးတွေ ရွာလာလို့ ပြေးရတာ…စတာတွေက Continuous reading
၁၀.၇.၂၀၁၉ မှ ၁၇.၇.၂၀၁၉ အထိ တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက် သား/သမီးများ အတွက် ဗေဒင်
၁၀.၇.၂၀၁၉ မှ ၁၇.၇.၂၀၁၉ အထိ တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက် သား/သမီးများ အတွက် ဗေဒင် တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ခရီးသွားရန်အစီအစဉ်ရှိပါက ခရီးကိစ္စအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ မိမိနှင့်မဆိုင်ဘဲ သူတစ်ပါးတို့၏ ကိစ္စများကိုလူပင်ပန်း၊ စိတ်ပင်ပန်းခံပြီးလုပ်ပေးရတတ် ပါသည်။ သင်္ဘောတက်ရန်အတွက် အခက်အခဲရှိနေသူတို့သတင်းကောင်းကြားရမည်။ အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ အလုပ်အကိုင်ကိစ္စများတွင် အခက် အခဲအဟန့် အတားများကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ မည်သည့်အခက်အခဲနှင့်ပဲ Continuous reading
မနက်အိပ်ယာထရင် တွေးသင့်သော အချက်များ
မနက်အိပ်ယာထရင် တွေးသင့်သော အချက်များ ၁ ။ ရွေးချယ်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်မှာရှိတယ် ။ ဒီနေ့ဟာ ကောင်းတဲ့နေ့ ၊ မကောင်းသောနေ့ဖြစ်တာတို့ ၊ ရာသီဥ တု သာယာမယ် ၊ မသာယာဘူးဆိုတာကို တွေးနေစရာမလိုပါ ။ ကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ဖို့ရန် မိမိသာလျှင် အဓိကပါ ။ Continuous reading
သူများလှူ ပြီးသား ပစ္စည်းတခုကို ကိုယ်က ပြန်ဝယ်ပြီး ပြန်လှူရင် ကုသိုလ်မရဘူးလား ?
သူများလှူ ပြီးသား ပစ္စည်းတခုကို ကိုယ်က ပြန်ဝယ်ပြီး ပြန်လှူရင် ကုသိုလ်မရဘူးလား ? မင်္ဂလာပါ ဦးဇင်း။တခုလောက် မေးချင်လို့ပါ။ သူများလှူပြီးသား ပစ္စည်းတခုကို ကိုယ်က ပြန်ဝယ်ပီး ပြန်လှူရင် ကုသိုလ်မရဖူးဆိုတာဟုတ်ပါသလား ? ဥပမာ ပြောရရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ သင်္ကန်းတွေ ပေါများနေလို့ တပည့်တော်မက အသစ်တခု Continuous reading